ရာမညသားလေး: my software
၀န်ခံချက်။ ။ဒီ software များအားလုံးဟာ မြန်မာနည်းပညာ blog များ
မြန်မာ blogger များမှတစ်ဆင့် ပြန်လည်ဝေမျှပါသည်........
ကွန်ပြူတာထဲက temp file တွေ၊ delete fileတွေကိုရှင်းထုတ်တဲ့ software ပါ.....
အောက်ပါ link များမှာရယူနိုင်ပါတယ်.......
mp3, mp4, photo, media file များကို ကြိုက်သလို format ပြောင်းလို့ရတဲ့
မြန်မာ၊ အင်္ဂလိပ် dictionary လေးပါ......
zip file တွေကိုပြန်ဖြေတဲ့ software လေးပါ......
ကွန်ပြူတာထဲမှာရှိတဲ့ ဓါတ်ပုံတွေကိုတစ်စုတစ်ရုံးထဲကြည့်နိုင်ပြီး webalbum ထဲမှာ
upload တင်နိုင်တဲ့ software ဖြစ်ပါတယ်...
window vista သုံးသူများအတွက် window active မဖြစ်တော့ရင်ဒီ software လေးကို
rum ပြီး reactive ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်....
တစ်ချို့ mp4, mp3 player တွေမှာ amv file တွေပဲလက်ခံတဲ့အတွက် amv converter
လိုအပ်သူများ....အောက်မှာပေးထားတဲ့ link တွေကရယူနိုင်ပါတယ်......
rar file တွေ zip file တွေကို ဖြေရန်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်အပ်ပါတယ်....
usb virus တွေကိုကာကွယ်ဖို့အတွက် usb virus security ကို
အောက်မှာပေးထားတဲ့ link တွေကရယူနိုင်ပါတယ်......serial key ပါအောက်မှာပေး
window movie maker2.6
ဓါတ်ပုံတွေ၊ ဗီဒီယို ဖိုင်တွေကို photo slide show ပြုလုပ်ချင်သူများ...
အောက်မှာပေးထားတဲ့ link တွေကရယူနိုင်ပါတယ်......
ကွန်ပြူတာက delete file တွေ temp file တွေကို သန့်စင်ပေးတဲ့ software လေးပါ..
လိုချင်သူများ..အောက်မှာပေးထားတဲ့ link နေယူနိုင်ပါတယ်....
active key ကတော့.....
နောက်ဆုံးထွက်လာတဲ့ zawgyi မြန်မာယူနီကုတ်ပါ...(2009 version)
window တစ်ခုလုံးကိုမြန်မာလို ပြောင်းပေးနိုင်ပါတယ်...မြန်မာစာရိုက်ရတာလည်း
youtube website မှ video များကို ဒေါင်းလော့ဆွဲတဲ့အခါ အရမ်းကိုမြန်ဆန်ပြီး
လွယ်ကူစေတဲ့ software လေးပါ....
.အောက်မှာပေးထားတဲ့ link နေယူနိုင်ပါတယ်....
free templates site...
Blogger Templates ပေါင်းစုံဒေါင်းလို့ ရတဲ့ဆိုက်
Templates တွေကိုဒေါင်းပါတယ်။ သူငယ်ချင်း
တို့ လည်း ဒေါင်းချင်ရင်အောက်ကလင့်ခ်မှတစ်
window7 ကိုမြန်စေတဲ့ software
Windows7Manager ကတော့ မြန်ပြီးသားဖြစ်တဲ့ windows7 ကိုထပ်ပြီးမြန်အောင် optimize
လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ system utility တစ်ခုဖြစ်သလို system speed ကို တိုးမြင့်အသုံးပြုနိုင်အောင်လည်း
ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါတယ် နောက်ပြီး security အပိုင်းနှင့် တခြားခြားသော အရေးကြီးတဲ့ အပိုင်းတွေကိုလည်း Manage လုပ်ပေးနိုင်တဲ့အတွက် windows7 အသုံးပြုသူတိုင်း ရှိထားသင့်တဲ့
BATTERY DOUBLER SOFTWARE.......
SUPER RAM SOFTWARE
မိမိတို့ရဲ့ ကွန်ပျူတာ Memory တွေ မြန်ဆန်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးမယ့် SuperRam လေး ဖော်ပြပေး လိုက်ပါတယ်။ မိမိ ကွန်ပျူတာ သုံးနေစဉ်အတွင်းမှာလဲ Memory ကို ဘယ်လောက် အသုံးပြုနေတယ် ဆိုတာတွေကို ဖော်ပြပေးနေပါတယ်။ Memory ရဲ့ စံကိုလဲ စမ်းသပ်လို့ ရပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားသူများ Download လုပ်ယူပါ။
ဓါတ်ပုံဘောင်လှလှလေးတွေထဲမှာ မိမိတို့ရဲ့ ပုံတွေ ထည့်ဖို့အတွက် ဆော့ဝဲလ်ကောင်းလေးကို ဖော်ပြပေး လိုက်ပါတယ်။ အမြဲတမ်းသုံးနိုင်ရန် A Code ဖိုင်လေး ထည့်ပေးထားပါတယ်။
Install လုပ်ပြီးရင် အရင်ဦးစွာ C: ထဲက Program File ဆိုတာ ရှိပါတယ်။ အဲဒီမှာ FrameShow ဆိုတဲ့ ဖိုဒါရှိနေမှာပါ။ အဲဒီဖိုဒါထဲကို Crack File လေးကို Copy ယူပြီး ထည့်လိုက်ပါ။ ရောက်သွားရင် အဲဒီဖိုင်ကို Run လိုက်ပါ။ Activation Code ဖြည့်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ User Name ကိုတော့ မိမိတို့ နှစ်သက်ရာ ပေးပါ။ AC ကိုတော့ A Code natepad ဖိုင်လေးထဲမှာ ရှိပါတယ်။ ဆော့ဝဲလ်ကို ဒီမှာ Download လုပ်ယူပါ။ အဆင်ပြေပါစေ။
မိမိတို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် Signature ပြုလုပ်ချင်သူများအတွက် Signature Software လေး ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ အမြဲတမ်းသုံးစွဲ၍ ရအောင်လဲ Patch ဖိုင်လေးပါ ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။ ဆိုက်ကတော့ သေးပါတယ်။ 1 MB ကျော်ကျော်သာ ရှိပါတယ်။ ဒီမှာ Download လုပ်ယူပါ။
I.D.M DOWNLOAD MANAGER
အားလုံးရဲ့ အသည်းကျော်ကြီး IDM 5.18 Version ကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ အမြဲတမ်းသုံးလို့ရတဲ့ Patch file ပါ ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။ ဒီမှာ Download လုပ်ယူပါ။ အားလုံးအဆင်ပြေပါစေ။
USB INTIVIRUS SOFTWARE
USB Security ရှိခြင်းဟာ မိမိတို့ ကွန်ပျူတာတိုင်းမှာ ဗိုင်းရပ်စ် အန္တရာယ်အတွက် အင်မတန် လုံခြုံစိတ်ချရပါတယ်။ ယခု ထပ်မံ ဖော်ပြပေးလို့တာကလဲ USB Security အတွက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ယခု ဆော့ဝဲလ်လေးကို မိမိတို့ရဲ့ စက်တွေမှာ Install လုပ်ထားရင် USB Stick ထိုးလိုက်တာနဲ့ Stick ထဲမှာ ပါတဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်ကို သတ်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မဖြစ်မနေ ဆောင်ထားသင့်တဲ့ ဆော့ဝဲလ်လေးပါ။ ဒီမှာ Download လုပ်ယူပါ။
၁) name = user
၂)regesiter code = 393E3f4C529A9bBC9dB0b2D5eeEC10a17618b1C11d11F722b25827
ဓါတ်ပုံတွေကို ဖရိန်တွေ၊ အရုပ်တွေနဲ့အလှဆင်တဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲလ်ပါ...
ဒီမှာသာ Download ဆွဲပေတော့။ Keygen တော့ ထည့်ပေးထားတယ်။ ဖွင့်မရတဲ့သူတွေအတွက် Reg No: computer နဲ့ Reg Cod: D4E5-8CB5-F9F6-2291 ထည့်သုံးပေတော့။
မဖြစ်မနေ ရှိသင့်တဲ့ မြန်မာအဘိဓာန်ပါ။ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာစာအဖွဲ့က ကြိုးကြိုးစား ပြုစုထားတာပါ။ မိမိကတော့ သဘောကျတယ်။ ကျေးဇူးလဲ တင်မိတယ်။ ဒီမှာ Download ယူပါ။ ဖောင့်ကို ဒီမှာ ယူပါ။
WINDOW 7. LODER VERSION 1.8
ဒါကတော့ Windows7Loader v1.8 လေးဖြစ်ပါတယ် ဒီဆော့လ်ဝဲ ကတော့ window7တွေကို full activate လုပ်ပေးတဲ့ ဆော့လ်ဝဲလေး ဆိုတာကို သိကြမှာပါ ကျွန်တော်တို့ သုံးတဲ့ဝင်းဒိုး window7တွေဟာ full activate မရပါဘူး အဲ့ဒါကြောင့် ဒီ Windows7Loader v1.8 လေးနဲ့ သုံးလိုက်ရင် full activate ဖြစ်သွားပါပြီး လိုရင်အောက်မှာယူလိုက်ပါ။
အသုံးပြုနည်းကတော့ အင်မတန်ရှင်းလင်းလွယ်ကူပါတယ်။ ဒေါင်းလုပ်ယူထားတဲ့ WinRar ဖိုင်လေးကိုဖြည်ပြီး Windows7Activator လေးကို Double-click လုပ်လိုက်ရုံပါပဲ။ သူ့အလိုလို Windows Restart လုပ်သွားပါလိမ့်မယ်။ Windows ပြန်တက်လာတဲ့အခါ Activate လုပ်သွားပြီးဖြစ်သွား ပါလိမ့်မယ်။ အလိုရှိသူများ အောက်မှာ ဒေါင်းလုပ်ယူလိုက်ပါခင်ဗျာ..။ Windows7 Version အားလုံးနဲ့ အဆင်ပြေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ အကယ်၍အဆင်မပြေခဲ့ရင်လည်း ကွန်မန့်မှာ ပြောခဲ့ကြပါ။ နောက်ထပ် Activator လေးကို ဖော်ပြပေးပါ့မယ်။ အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ..။
အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ..။ ဒီတစ်ခါ မိမိတို့အသုံးပြုနေတဲ့ ကွန်ပျူတာတွေ သွက်လက်မြန်ဆန်စေဖို့အတွက် အသုံးဝင်လှတဲ့ Advanced System Optimizer လေးကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ အခြားသော Utilities Software တွေထက် ထူးခြားတာက မတော်တဆဖျက်လိုက်မိတဲ့ ဖိုင်တွေကို Recovery လုပ်ပေးနိုင်ခြင်း၊ Driver တွေကို update လုပ်ပေးနိုင်ခြင်း၊ Duplicate ဖြစ်နေတဲ့ဖိုင်တွေကို ရှာဖွေပေးနိုင်ခြင်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အသေးစိတ်ကိုတော့ ဒီနေရာမှာ သွားရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ အသုံးပြုလိုသူများ အောက်မှာ ဒေါင်းလုပ်ယူကြပါခင်ဗျာ..။
ဒီ software တွေဟာ မြန်မာ IT ဆရာကြီးတွေက တဆင့်နည်းပညာဖြန့်ဖြူးလိုတဲ့စိတ်
ဓါတ်နဲ့ ကျွန်တော်သုံးသလို မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတွေသုံးနိုင်ရအောင် ပြန်လည်ဝေငှလိုက်ပါတယ်..
အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ.။ အခု ကျွန်တော်ဖော်ပြပေးမှာကတော့ မိမိတို့ရဲ့ ကွန်ပျူတာမှာ လိုအပ်နေတဲ့၊ ဒါမှမဟုတ် out of date ဖြစ်နေတဲ့ Driver တွေကို ရှာဖွေပေးမယ့် ဆော့ဖ်ဝဲလ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ကို အသုံးပြုဖို့အတွက် အင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်တော့ ရှိဖို့လိုပါတယ်။ ဒါမှသာ မိမိစက်နဲ့ ကိုက်ညီမယ့် Driver တွေကို ရှာဖွေဒေါင်းလုပ် လုပ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Windows 98/ME/2000/XP/Server 2003/Vista/7/x64 စတဲ့ OS တွေကို Support လုပ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။
အသုံးပြုဖို့အတွက်ကတော့ အရင်ဆုံးအောက်မှာပေးထားတဲ့ လင့်မှာ ဒေါင်းလုပ်ယူပြီး WinRar ဖိုင်ကို ဖြည်ပါ။ Setup ကို Install လုပ်ပါ။
Serial Key ဆိုတဲ့ Folder ထဲက DriverDB ဆိုတဲ့ dat ဖိုင်ကို Copy ယူပြီး Install လုပ်ထားတဲ့ Folder ထဲမှာ Paste လုပ်လိုက်ပါ။ ( C:\_Program Files\_Driver Magician )
Application ကို Open လုပ်ပါ။ Name နဲ့ Serial Key ကိုတော့ Notepad ဖိုင်ထဲမှာ ပါတဲ့အတိုင်း ထည့်လိုက်ပါ။ အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ..
ဒီ software ကိုတင်ပေးတဲ့နည်းပညာဆရာကြီးတွေကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ...
mp3 to karaok ပြုလုပ်နည်း
တကယ်ကိုကောင်းတဲ့ Software လေးပါ။ တချို့ကတော့သိပြီးသာတွေလဲရှိမှာပေါ့.. နာမည်လေးက Audacity လို့ခေါ်ပါတယ်
Step လေးကိုလဲ သေချာမှတ်မိရအောင်..ရေးပေးလိုက်ပါတယ်.။
Open- new mp3 ပြီးတော့.. ပေါ်လာတဲ့ mp3 song အပေါ်မှာ Right click ပြီးတော့ Split stereo ပြီးတော့..
Effect- invert လုပ်ပါပြီးတော့ ..နှစ်ခုလုံးကို Mono ပြောင်းပေးပါ..
adobe phtoshop 7.0 (with serial no.)
အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ Adobe Photoshop 7.0 ကို အသုံးပြုချင်သူများ အောက်မှာ ဒေါင်းလုပ်ယူလိုက်ကြပါ။ အသုံးပြုနည်းကတော့ ပေးထားတဲ့ အပိုင်း(၂)လုံးကို ဒေါင်းလုပ်ယူပြီး WinRar ဖိုင်ကို ဖြည်ပါ။ Serial ကတော့ ဖြည်လိုက်တဲ့ Folder ထဲမှာ Notepad နဲ့ရေးထားပါတယ်။ အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ...။
အပိုင်း(၁) 80 MB
အပိုင်း(၂) 73.5 MB
face smoother 2.54 (portable)
Face Smoother ကတော့ ဓါတ်ပုံတွေကို ချောမွေ့သွားအောင် လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ tool ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဆော့ဝဲလ်ကို ညွှန်းထားတာကတော့ ခပ်ကဲကဲပင်။ မယုံရင် ဤတွင် ဖတ်ကြည့်ပါ (With PCBoost your computer will run faster than ever before. Boost the performance of your PC the easy way.) မြင်သည့်အတိုင်းပင်။
ပြောမယုံ ကြုံမှ သိနိုင်အောင် Install လုပ်၍ သုံးကြည့်နိုင်၏။ အမြဲတမ်းသုံးနိုင်ဖို့ လိုင်စင်ပါ ထည့်သွင်း ပေးထားပါတယ်။ ဒီတွင် Download လုပ်ယူပါ။
္ဂ ကျွန်တော့် blo...
*** ပါပါးရင်ထဲမှာ..... အမြဲတမ်း...